Moments leh saaxiibo 52
Waa maxay qosol, maxayna dadku qoslaan?
Qosolku waa muujinta dareenka maskaxda iyo shucuurta iyada oo la adeegsanayo dhawaaqyada codka ee gudaha. Shakhsiga iyo duruufaha qosolkiisa leh, waxay kuxirantahay noocyada iyo dabeecada qosolka; sida qosol, gogol-xaar, xallin, dhalinyaro fudud oo karti badan; jilicsan, macaan xariir, ama qosol badan oo dabeecad wanaagsan oo deeqsinimo leh; qosol qosol, majaajilo, qaylid, caytamo, jeesjees, quudhsasho. Markaa waxaa jira qosol nacasnimada ah oo munaafiqiinta ah.
Qosolku waa hubaal inuu muujiyo astaamaha iyo iskudarka jirka iyo maskaxda qofka qoslaya, madaama hadalku yahay tusaha horumarka maskaxda oo siisa macneheedu. Madax xanuun qabow, xabeeb, ama jirro kale oo jidhka ah, ayaa laga yaabaa inay wax ka beddesho jilicsanaanta iyo wareegga qosol, laakiin carqaladaas jidhka ahi kama beddeli karto ruuxda iyo dabeecada u galeysa qosolkaas.
Gariirka jireed ee qosolka waxaa sababay ficillada fiilooyinka codka iyo larynx ku dhaca ciidanka cirka. Laakiin fikirka maskaxda waqtiga qosolku wuxuu siiyaa ruuxa qosolka, oo wuxuu u dhaqmaa habka neerfaha sida inuu ku qasbo murqaha iyo codka noocaas oo jirka iyo tayada siinaya codka ay ruuxu qosolku kujiro. muujiyey.
Sida waxyaabo badan oo yaab leh oo nolosha ah, qosolku waa caadi oo looma arko inuu yahay wax la yaab leh. Waa wax cajiib ah.
Maskax la'aan ma jirto qosol. Si loo qoslo waa in qofku maskaxda ku hayaa. Doqonku qaylo buu samayn karaa, laakiinse qosli maayo. Daanyeer ayaa ku dayda kuna sameyn kara waxyaabo madoow, laakiin ma qosli karo. Baroodku wuu ku daydaa dhawaaqa qosolka, laakiin ma qosli karo. Lama yaqaan waxa ay isku dayayaan inay ku qoslaan; iyo qofkasta oo xaafada jooga wuu yaqaana goorta loo yaqaan 'pararot' oo tusaale ka dhiganaya qosol. Shimbiraha ayaa laga yaabaa inay boodaan oo ku duulaan oo ay qoraxda qoraxda ku qoraan, laakiin ma jiro qosol; bisadaha iyo kittens-ka ayaa laga yaabaa inay nadiifiyaan, duudduubtaan, isdilaan ama weydo, laakiin ma qosli karaan. Eyada iyo eydu way roonaan karaan wayna ka boodi karaan oo way ka dhex bixi karaan cayaaraha ciyaarta, laakiin lama siiyo inay qoslaan. Mararka qaarkood marka eey fiiriso wejiga dadka iyadoo la yiraahdo waxa "sirdoonka noocaas ah" iyo waxa ay umuuqato indho garasho, waxaa la yiraahdaa malaha wuu fahmaa madadaalada wuxuuna isku dayayaa qosol; laakiinse isagu ma uu kari karo. Xayawaanku ma qosli karo. Xayawaanka qaar ayaa mararka qaar ku dayda codadka codka, laakiin taasi fahamka erayda ma aha. Waxay ugu badnaan noqon kartaa echo. Eygu ma fahmi karo macnaha ereyada ama qosol. Sida ugu wanaagsan wuxuu ka tarjumayaa rabitaanka sayidkiisa, oo heer uu kaga jawaabo damacaas.
Qosolku waa erey lama ilaawaan ah oo maskaxda lagu hayo, xaaladna si lama filaan ah u muujiya wax aan habboonayn, foolxun, ku habboonaan la'aan, isqarxin. Xaaladdaan waxaa bixiya qaar dhacaya, ama ficil, ama ereyo.
Si aad u hesho faa'iidada buuxda ee qosolka iyo inaad awoodid inaad si dhakhso ah u qosli karto maanka waa in, marka lagu daro deg-degga si loo fahmo jahwareerka, jahwareerka, xaalad lama filaan ah ee xaalad. leedahay awood xirfadeed male-awaal ah. Haddii aysan mala-awaal malahan, maanka ma arki doono wax ka badan hal xaalad, sidaa darteedna maqnaanshaha qadarin dhab ah. Laakiin marka ay mala-awaal tahay maskaxdu si dhakhso leh ayey sawir uga bixin doontaa dhacdadaas kale ee dhacdooyinka kale ee lagu qoslo iyo xaaladaha waxayna la xiriiriyaan ciladaha wada noolaanshaha.
Dadka qaar waxay dhakhso u fahmaan xaalad oo ay u arkaan dhibic kaftan. Kuwo kale way fahmi karaan xaalada, laakiin mala-awaal la’aan ma arki karaan waxa xaaladaasi ku talin lahaa ama u horseedi lahayd iyo waxa ay la xariirto, waana ay ka gaabiyeen inay u arkaayaan qodobka kaftanka ama xaalad kaftan ah iyo daahitaan raadinta sababta dadka kale way qoslayaan.
Qosolku waa mid lagama maarmaan u ah horumarka aadanaha, iyo gaar ahaan horumarka maskaxda si uu ula kulmo dhammaan xaaladaha nolosha. Wax yar oo qosol ah ayaa ka jira cabidda cadaadiska monotonous iyo dhibaatooyinka. Markay noloshu u baahan tahay halgan joogto ah si loo helo jiritaanka cidla, markii dagaal iyo xasillooni darradu dalka ka buuxdo, markay dhimashadu midho ka soo baxdo dab iyo daadad iyo dhulgariir, markaa waxaa la arkaa argagax iyo dhibaatooyin iyo dhibaatooyinka nolosha. Xaaladahan oo kale waxay keenaan kuna khasbaan dulqaadashada iyo xoog maskaxda iyo dhaqsaha wax qabad. Sifooyinkaan maskaxda ayaa lagu horumariyaa iyadoo lala qabsado lagana gudbo xaaladaha noocaas ah. Laakiin maskaxdu sidoo kale waxay u baahan tahay fududeyn iyo nimco. Maskaxdu waxay bilaabeysaa inay yeelato xasil, fudayd, nimco, qosol. Qosolku wuxuu lama huraan u yahay fududeynta iyo nimcada maskaxda. Isla markii baahiyaha nolosha la siiyo, oo ay bilaabaan inay wax siiyaan meel fara badan, qosol ayaa yimaada. Qosol ayaa maanka ka dhigeysa mid aan caqli lahayn, oo adaygga adkaantaana wuu ka qaadaa. Qosolku wuxuu maskaxda ka caawiyaa inuu arko iftiinka iyo farxadda nolosha, iyo sidoo kale mugdiga iyo qabowga. Qosolku wuxuu maskaxda ka saaraa culeyska ka dib halganka uu ku marayo waxyaabo culus, daran iyo waxyaabo xun. Qosolku maskaxda ayuu ku hayaa dadaalka cusub. Markii la helo awooda lagu qoslo, maskaxdu waxay dib u cusbooneysiin kartaa xooggeeda oo ay la tacaali kartaa dhibaatooyinka, waxay ka hor tagi kartaa kacsanaanta iyo xitaa jahwareerka, waxayna badanaa ka kaxayn kartaa cudur ama cudur. Markii nin siiso feejignaan badan qosol, ka dib jaceylka qosolka wuxuu ka hor istaagayaa inuu qirato halista, waajibaadka, waajibaadka iyo shaqada nolosha. Ninka noocaas ah waxaa laga yaabaa inuu noqdo mid fudud oo qalbi furan oo dabeecad wanaagsan, wuxuu arkaa dhinac ka mid ah waxyaabaha xiisaha leh, wuxuuna noqon karaa qof wada socda, saaxiib wanaagsan. Laakiin inta uu sii wado ka dhigista qosol farxad, wuxuu noqdaa mid jilicsan oo aan ku habboonayn inuu la kulmo xaqiiqada dhabta ah ee nolosha. Waxaa laga yaabaa inuu ka qoomamoodo oo uu u qoslo ninka uu u maleynayo inuu nolosha si daran u qaadanayo, laakiin wuu fahmaa oo wuu ka mahadnaqayaa nolosha inuusan ka fiicneyn kan nolosha ku dhaca isagoo sita qalbi culus oo culeys culus kala kulma.
Inta badan dabeecada nin waxaa lagu garan karaa qosolkiisa waqti ka yar ereyadiisa, sababtoo ah wuxuu isku dayaa inuu wax yar qariyo isla markaana uu qarin karo qosolkiisa. Ereyada wuu awoodaa badanaana macnaheedu waa ka soo horjeedda waxa uu leeyahay.
Ma jiro qof aan soo dhaweyn doonin taajiriinta, codka buuxa, qosolka deeqsinimada leh ee qadarinta deg degga ah iyo kaftanka wanaagsan ee u kuur galaya muggiisa iyo codkiisa si uu ugu haboonaado dhacdada iyo goobta, iyo yaa ku fashilmi doona inuu ka fogaado goldaloolada madhan ama gunta qof si caajisnimo ah ugu adkeysta shaashadiisa ama gobble, ha ahaato ama munaasabaddu ha ka xanaajiso. Qofku inuu si fiican u qaniin yahay ama uusan si fiican u qallalan, buuxiisa ama miyirkiisu dhanyahay ama shucuur ahaanta ama qiirada ayaa lagu garan karaa qosolkiisa. Kuwa leh u nuglaanta xanaaqa, wax ku habboon ama xaalad kacsanaan ah, waxay ku tusi doonaan iyagoo kaftamaya, maroojisyo gaaban, ama qeylo dheer oo qosol leh. Buuqa, buuqa, dhawaqyada saqafka leh, xijigiisa, taatikada, waa astaamo muujinaya dabeecad ahaan sida dabeecad wanaagsan oo wareegsan ayaa lagu muujiyay wada noolaanshaha qosolka. Is-kaftanka qosolku wuxuu muujinayaa horumar sifiican u dhisan oo dabeecad ah, dhib malahan wixii laga yaabo inuu qoslo. Khiyaanooyinka qosol ayaa muujinaya horumar la'aan dabeecad ahaan, si kasta oo qofku isku dayo inuu qariyo waxa uu ka maqan yahay. Khilaafaadku waxay meel ku wada noolaadaan qosol, maaddaama dabeecadda la horumariyo. Muuqaalka, garoonka iyo mugga kala qeybsanaanta ee qosolka, waxay muujinayaan la'aanta ama maroojinta horumarka dabeecada.
Qofka leh magnetismkiisa qosolkiisa badanaa waa mid dabiici ah iyo dabeecad xasaasi ah. 3 Kuwa wax khiyaaneeya, iyo khiyaanooyinka, iyo qalloocnaanta, iyo kuwa qalloocan ayaa qosolkooda dib uga celin doona, In kastoo ay erayadooda khiyaanayn ama khiyaanayn.